Mogadishu Journal » 2019 » June » 14
Faahfaahin ka soo baxeysa qaraxyo ka dhacay magaalooyinka Baydhabo iyo Buurhakaba
Mjournal :-Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qaraxyo ka dhacay magaalooyinka Baydhabo iyo Buurhakaba oo ka tirsan gobolka Baay, kuwaasoo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Sida wararku sheegayaan qaraxa hore waxa uu ka dhacay xalay maqaaxi lagu caweeya oo ku...
Kenya oo Malaayiin doolar ku bixineysa jaadka
Mjournal :-Beeraleyda Khaatka ee Kenya ayaa helaya miisaaniyad lacageed oo lagu horumariyo wax soo saarka beerahooda. Dadka leh beeraha khaatka uu ka baxo ayaa ku mideysan urur u dooda xuquuqdooda, waxaana markii uu xirmay suuqii Yurub ay dowladda Kenya ku caddaadiyeen sidii ay...
Mjournal :-Dowladda Soomaaliya ayaa walaac ka muujisey shirar maamlaamahn magaalada Nairobi ee dalka Kenya uga socda qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada. Madaxweynayeyaasha Jubaland, Galmudug, xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamanka Soomaaliya iyo siiyaasiyiin...
Kenya oo sheegtay in xubno ka tirsanaa Al-Shabaab ku dhinteen qarax ay dhigayeen
Mjournal :-Saraakiisha Ciidanka Kenya ee Gobolka Lamu ayaa sheegay in Afar ka mid ahaa Ururka Al-Shabaab ay ku dhinteen qarax , markii ay la kacday Miino ay iyagu aasayeen Shalay. Guddoomiyaha Gobolka Lamu, ahna madaxa howlgalka Keymaha Boni, Joseph Kanyiri ayaa sheegay in...
Qarax Khasaaro geystay oo ka dhacay Magalada Baydhabo
Mjournal :-Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah geystay oo xalay ka dhacay Suuqa ku yaalla xaafad ka tirsan Magalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay. Qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ah ayaa la dhigay Goob maqaaxi ah oo dad...
Galmudug oo War ka soo saartay dad lagu dilay duleedka Dhuusamareeb
Mjournal :-Maamulka Galmudug ayaa sheegay inay ka xun yihiin dhacdadii Afarta ruux lagu dilay ee dhawaan ka dhacday deegaanka dhiin-Waris oo 18km dhinaca Bariga kaga began Magalada Dhuusamareeb ee Xarunta Gobolka Mudug. Madaxa Xukuumadda Maamulka Galmudug Maxamed Shaakir Cali...
Mjournal :-Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ka qeyb galay Shirka sanadlaha ee Bangiga Aduunka ee ka dhacay dalka Equitorial Guinea ayaa kulan la qaatay Madaxweynaha Bangiga Horumarinta Afrika Akinwumi Adesina. Kulanka ayaa labada...
Dowladda oo faahfaahisay halka uu maraayo dhismaha maamulka Galmudug by Ahmed Ali - Sat Dec 14th 11:16:31